Earldom M32 Multicolor Ambery Light MP3 Player3ports QC3.0 + PD USB-C USB-C အမြန်ဖုန်း FM Transmitter Transmitter Transmitter Carr.0
ကား Bluetooth FM transmitter m62
အကောင်းဆုံး Earldom FM Transmuethooth Bluetooth bluetooth bluetooth 5.0 Handsfree Car Kit PPS QC3.0 QC4.0 qc3.0 qc4.0 5a fm charger auto fm modulator ပေးသွင်းသူ MP3
အကောင်းဆုံး Earldom FM Transmatter Bluetooth Bluetooth နှင့်သဟဇာတ 5.0 Car Kit Dual USB Carb Carber MP3 Music Player Mp3 Music Player
Earldom Bluetooth FM Transmit Display ကား Charger Adapter ကြိုးမဲ့ Bluetooth Hirethter Virethter Virethter Virethter Viret Virce Vire Kit
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > ကား Bluetooth
Earldom M62 ရောင်စုံဝန်းကျင်နဲ့ LED အလင်းက MP3 Player ကို3ဆိပ်ကမ်း QC3.0 + PD ကို USB-C ကိုမြန်ဖုန်း FM ရေ transmitter မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာ
ကို ABS + ကို PC
QC output 1: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A, 9V / 2a, 12V Output 2: 5V / 3A, 9V / 2a, 12V / 1.5A USB-A: 5v1A: 5V1A
စုစုပေါင်း output ကို
PC + ABS, ခရမ်းလွန်မှုန်ရေမွှားများသည်အကောက်ခွန်ပိုးစာရှုလှိုင်းကိုပေးနိုင်သည်
50 * 37 * 83mm
Earldom အကောင်းဆုံး Earldom M62 ရောင်စုံဝန်းကျင်နဲ့ LED အလင်းက MP3 Player ကို3ဆိပ်ကမ်း QC3.0 + PD ကို USB-C ကိုမြန်ဖုန်း FM ရေ transmitter မော်တော်ကားအားသွင်းကိရိယာစက်ရုံစျေး - Earldom, အဆိုပါထုတ်ကုန်အကွာအဝေးကြွယ်ဝသောကွဲပြားခြားနားသည်။
multicolor ။ အနီရောင်, အစိမ်း, အပြာရောင်, လိမ္မော်, ခရမ်းရောင်, ရေခဲ, ရေခဲအပြာ, အဖြူ, static7အရောင်များ, ပြောင်းလဲနေသော7အရောင်များ။ ပြင်လက်စွပ်ပေါ်တွင်အလင်း switch ကိုဒီဇိုင်းကားများ၏အတွင်းပိုင်းအာကာသအသစ်တစ်ခုလေထုဖန်တီးပေးပါတယ်။
2. Bl V5.0, အလိုအလျောက်ဆက်သွယ်မှု, အပြာ - သွားအကွာအဝေး5မီတာအထိ
3. ကြည်လင်သောအသံအရည်အသွေး, တေးဂီတ, အညွှန်း, အသံလွှင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းများကိုနားထောင်ခြင်း
Pre-ရောင်းချ 4.Complete နှင့်ရောင်းချပြီးနောက်ပိုင်းဝန်ဆောင်မှု။
Shenzhen Kaisinuo Electronics Co. , Ltd. သည်မိုဘိုင်းဖုန်းဒေတာလပ်ဘေးရှိ, Car MP3, ChargerRer, Selfier ပစ္စည်းကိရိယာများ, လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, လက်ကိုင်ဖုန်းဆက်စပ်ပစ္စည်းများနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များနှင့်အခြားထုတ်ကုန်များ, Shenzhen Kaisinuo အီလက်ထရွန်နစ်အီလက်ထရောနစ်ကုမ္ပဏီလီမိတက်, Ltd. သမာဓိရှိခြင်း, ထိုသို့သော Earldom Kasinuo အဖြစ် 3C ဒီဂျစ်တယ်ထုတ်ကုန်များဆက်တိုက်ပိုင်ဆိုင်သည်။